"Ukhukhamba Broken": okubabayo isidlo Chinese
AmaShayina Ziningi nenhlonipho kanye ukhukhamba bathambekele usubengeze iyiphi isidlo, lokho kungenzeka. Nokho, kunjalo futhi kakhulu othanda ifomu elihlukile. Chinese "ukhukhamba Broken" - omunye Ungadla elula, okuyinto ngaphakathi spite of primitiveness uyawuthanda ibe yimpumelelo enkulu kokubili ekhaya emhlabeni jikelele. Ilungiselela ngokushesha kakhulu futhi kufanelekile cishe bonke izitsha. Futhi njengoba 'zakus "ngaphansi ingilazi iholidi nje ephelele.
Ukhukhamba futhi indlela efanele yokusingatha
Ukuze "ukhukhamba Broken" ngesiShayina you siza, kudingeka siqale ngokuphumelelayo asondele kukhethwa zemifino. Khohlwa prickly Kripen'ka izingane, udinga ukhukhamba dlinnoplodnyh izinhlobo.
Manje ngokwelashwa kwabo. Isihloko "ukhukhamba Broken" ubeke mfana: imifino badinga beat ezinhle. Kunezinhlobonhlobo zezindlela ezimbili kungenzeka. Ngokusho inguqulo yokuqala yamakhukhamba ngokwanele ukuba Thrash pin rolling noma ngesando ngefomu okuqinile. Kodwa sesiseduze xaxa version yesibili. Kuyinto imfihlo ukuthi yemifino eside has a imbewu esikhundleni esikhulu. Futhi isidlo kube engadingekile ngokucacile. Ngakho-ke kungcono ukusika ikhukhamba lengthwise futhi baphale "yangaphakathi" ngommese, njengoba kwenziwa nge ithanga ikhabe. Ngemva yemifino lizoqeda Imi namathuluzi machining ukwambula (kodwa hhayi kashepodobnogo isimo!). Eshayayo isidingo impregnation kangcono imifino marinade.
Okulandelayo nalutho enkulu inqanyulwa ngokuphambeneyo, engeza ezinye usawoti kanye kwesokunxele imizuzu eyishumi. Wakhululwa juice imisindvo (abanye abapheki ngisho imazisa ukuthi unqobe), futhi "ukhukhamba Broken 'zigcwele sauce pre-ezilungiselelwe. I ukuziqalela yokuqala ngaphandle kwakhe kanye yemifino lutho kakhulu okunye Ayibalwa.
"Ukhukhamba Broken": ukugcwalisa inani kadokotela 1
Nakani sauce. cuisine Chinese inikeza izinketho eziningana ukugcwaliswa. Ngoba, okokuqala kudingeka ukuxhuma sauce soy kanye black uviniga e inani nezinkezo ezintathu bese wengeza kubo wezipuni amabili amafutha zemifino. Kukhethwa ikakhulu lamantongomane. uwoyela Sesame - amabili spoonfuls okusamanzi uju yemvelo futhi umuntu wabe esengena. Ukuze "ukhukhamba Broken" abangu izinongo liyakufanelekela e marinade unezela ezine ingcindezi chesnochiny futhi Chili omisiwe. Useyisusile phezu ngokubona chef sika. Emva ukugcwalisa isidlo inakekelwa okungenani ngekota yehora esiqandisini.
Refilling № 2
Nge "ukhukhamba Broken" wakhe abe kufinyeleleke kalula - lutho exotic akufakwanga sauce. It liyadingeka ukuze ukuxhuma isamba alinganayo vodka, usoso wesoya uviniga amafutha zemifino. Ukuze silondoloze ubuqiniso Kunconywa uwoyela Sesame usazothatha (kancane nakakhulu Kuzokwenzekani omnqumo, sunflower ukuze uthole esiphundu, kodwa bakudala). Uviniga kuhle ukuze bathenge ilayisi; uma ungakwazi - esikhundleni salo kalamula.
Le nguqulo wesithathu
Kulesi ukugcwaliswa yehlukile kunezinombolo iresiphi 1 esincane kodwa esiphawulekayo. Ngalo, uthola "ukhukhamba Broken." Ehluke ngokuphelele Recipe kuhlanganisa oyster soy nososo nge black (iyatholakala apula) uviniga ezithathwe spoon. Garlic kwi ivolumu kudinga tincetu ezintathu, uwoyela Sesame ngeke spoon lokubhulela. Plus Chili, ushukela nosawoti esilindele yakho.
Indlela ehlukile sokulungiselela
Uma konke odlule ishiwoyo la Carte ukupheka ke le ndlela idinga cishe amakhilogremu yamakhukhamba. UNkulunkulu wamnika ukunqoba ezinkulu; parallel ngangokunokwenzeka oqoshiwe kweqembu ezinhle dill futhi ugarliki eziyisishiyagalombili. Ukuze ukugcwaliswa uhlanganise isigamu inkomishi usoso wesoya isipuni esigcwele ushukela, ezimbili - amafutha yemifino, ezintathu - apple cider uviniga nohhafu spoon emhlabathini pepper abomvu. Black Beret ukunambitha, kanye usawoti. Konke lokhu ibekwe iphakheji Friend, ukunyakaziswa kahle futhi kuphela ngemva kokuba ulwisana pin rolling. Cooling ihora - futhi "ukhukhamba Broken" ukulungele.
Ngo osekelwe kuyo - ukhukhamba, uyanengwa kwemithetho engokwesiko. I juice sicindezelwe kusuka, basuke ukubeka endishini isaladi kulekelelwa nge garlic ochotshoziwe cilantro oqoshiwe mikhulu. I sigqoka kuyinto ukukhanya soy sauce, Sesame uwoyela nelayisi black uviniga - nje isipuni. Eyayihambisana ingxenye uhhafu nezinkezo uwoyela i-acute noshukela (kancane). Ukugcwala okugazingiwe isicinganani isaladi, ethela marinade - futhi ungazama cishe ngokushesha. Lokhu isaladi inikeza yokudlela, "iphazili Chinese." Singasho lapho ekujabulela okwandisa ukuthandwa. Nokho, asikho isidingo ukuvakashela iIgama, isaladi ngempela etholakalayo ukupheka DIY.
Salad nge amagilebhisi inkukhu. Ungadliwa for salads nge amagilebhisi
Lasekuqaleni isaladi izinhlanzi obomvu
Mimosa nge ushizi. gourmet Recipe
Kungani ukuqoqa onobuhle prefabricated izithuthuthu
Laminate "Karelian Flor":-Google +
Hemlock. Ukusetshenziswa imithi yendabuko
Ibhayisikili: isakhiwo, izinhlobo, ukwakhiwa, izingxenye ezisele. kudivayisi ibhayisikili
Ngayiphi indlela amagciwane ande: impikiswano noma ukuhlukana?
I-chlorine dioxide: ifomula, isicelo. Imiphumela ye-chlorine dioxide emzimbeni
Ikhishi iphinifa eyenziwe ngepulasitiki: emihle nemibi. Indlela yokwenza plastic ekhishini iphinifa
Carry kahle Strapless
Yini amagama abafanelekela amawundlu?
Iyini izinga lesikhathi se-geological?
Ushaka aquarium ushaka eyikati ekhaya